१४ जहाज किनेर 'सिड्नी र लण्डन' उडान गर्दै वायुसेवा निगमNepalpana - Nepal's Digital Online
काठमाडौँ। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स)ले कोभिड–१९ महामारीको असहज परिस्थितिमा पनि सन् २०२० मा अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा २५ प्रतिशत बजार हिस्सा ओगटेको छ ।
महामारीका बेला सीमित सङ्ख्याका अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सको उडान भएकाले निगमको व्यापार बढेको हो ।
महामारीका बेला सीमित सङ्ख्याका अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सले उडान गरेकाले निगमको व्यापार हिस्सा बढेको निगमका कर्पोरेट निर्देशक अर्चना खड्काले जानकारी दिइन् ।
भारतका तीनवटै गन्तव्यमा उडान सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । महामारीका कारण हाल नयाँदिल्ली गन्तव्यमा मात्रै उडान भइरहेको छ । छिट्टै बैङ्लोर र मुम्बइमा पनि उडान गर्ने तयारी भइरहेको निगमले उल्लेख गरेको छ । निगमले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै गन्तव्यमा उडान गर्ने आवश्यक जहाज खरिद गर्नका लागि सरकारसँग रु १५ अर्ब माग गरेको छ
भाेलिबाटै खुल्याे हवाइ सेवा, यस्ताे छ उडान तालिका !
आन्तरिक हवाई उडान पूर्णरूपमा सञ्चालन
वायुसेवा निगम निजीकरण गर्नेबारे सरकारले सार्वजनीक गर्याे आधिकारीक निर्णय !
पौष ९, २०७८ शुक्रवार १९:२०:५३ बजे : प्रकाशित